यस संवादमा तपाईँं अनुक्रमणिका वा तालिका पूर्वालोकन गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईँंले चयन गर्नु भएको अनुक्रमणिका वा तालिकाको प्रकारमा भर पर्दो, तलका ट्याबहरू प्रस्तुत भएका छन्.
निर्दिष्ट गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँंले घुसाउन चाहेको अनुक्रमणिका को प्रकार परिभाषित गर्नुहोस्। तपाईँंले अनुकूल अनुक्रमणिकाहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँंले अनुक्रमणिका शीर्षकहरू,बिभाजकहरू र अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्नलाई भिन्न अनुच्छेद शैलीहरू मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँंले यो संवादमा अनुच्छेद शैलीहरू परिमार्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठ शैली, फ्रेम, वा सेक्सनका लागि स्तम्भहरू र स्तम्भ सजावट सङ्ख्या निश्चित गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिका वा बिषय सूचीका लागि स्तम्भ सजावट निर्दिष्ट गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारण द्वारा,अनुक्रमणिका शीर्षक एक-स्तम्भ चौडा हुन्छ र बायाँ पृष्ठ सीमान्त बाट विस्तार हुन्छ।
सामग्रीको तालिका र अनुक्रमणिकाहरू प्रयोग गरेर